जिम्प - नि: शुल्क डिजाइन | क्रिएटिव अनलाइन
गिम्प GenericName (GNU छवि हेरफेर कार्यक्रम) को एक कार्यक्रम हो इमेजेन सम्पादक परियोजना को GNU। यो इजाजतपत्र अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको छ GNU जनरल सार्वजनिक लाइसेन्स.
यो गर्न को लागी सबैभन्दा मजबूत विकल्प हो फ्री सफ्टवेयर लोकप्रिय फोटो पुनःचर्चन कार्यक्रममा Photoshop। पहिलो संस्करण प्रणालीहरूको लागि विकसित गरिएको थियो युनिक्स र विशेष गरी डिजाइन गरिएको थियो जीएनयू / लिनक्सतथापि, हाल (संस्करण २.२) को लागी पूर्ण कार्यात्मक संस्करणहरू छन् Windows र लागि म्याक ओएस एक्स.
त्यहाँ एक संस्करण छ पोर्टेबल जिम्प जुन ढुवानी गर्न सकिन्छ र सिधा एक बाट प्रयोग गर्न सकिन्छ USB स्टिक कम्प्युटरमा स्थापना गर्न आवश्यकता बिना .
ग्राफिक नियन्त्रण पुस्तकालय GTK, GIMP का लागि विकसित, Windows Windows वातावरणमा वृद्धि भयो GNOME.
जिम्पलाई नि: शुल्क विकल्पको रूपमा विकसित गरिएको थियो Photoshop, तर पछिल्लाले अझै पनि बजारमा प्रिन्टि and र ग्राफिक्स उद्योग हावी राख्छ।
अन्तर्क्रियात्मक हुनुको साथै, GIMP ले म्याक्रोहरूको माध्यमबाट धेरै प्रक्रियाहरूको स्वचालित अनुमति दिन्छ। यसमा भाषा पनि समावेश छ योजना जुन यसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, अन्य विकल्पहरू जस्तै पर्ल, अजगर, Tcl र (प्रयोगात्मक) रूबी। यसले तपाईलाई स्क्रिप्ट लेख्न र प्लगइन जिम्पका लागि जुन अन्तर्क्रियात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ; पूरै गैर-अन्तर्क्रियात्मक तरिकामा छविहरू उत्पादन गर्न पनि सम्भव छ (उदाहरणका लागि, उडानमा छविहरूaको लागी उत्पन्न गर्नुहोस् वेब पृष्ठ हाइफन प्रयोग गर्दै CGI) र ब्याच प्रोसेसिंग प्रदर्शन गर्नुहोस् जसले र changes परिवर्तन गर्दछ वा छविहरू रूपान्तरण गर्दछ। सरल स्वचालित कार्यहरूका लागि यो प्याकेज जस्तै छिटो प्रयोग गर्नु छ ImageMagick, तर GIMP सँग धेरै शक्तिशाली सुविधाहरू छन्।
जिम्प प्रयोग गर्दछ GTK+ ग्राफिकल नियन्त्रण को एक पुस्तकालय को रूप मा; वास्तवमा GTK + जिमपको हिस्सा थियो, वाणिज्यिक पुस्तकालय बदल्न प्रयासमा प्रधान विचार, जसमा जिम्प मूल रूपमा निर्भर थियो। GIMP र GTK + मूल रूपमा प्रणालीको लागि डिजाइन गरिएको थियो X विन्डो मा कार्यान्वयन गरियो अपरेटिङ सिस्टम tipo युनिक्स, तर राखिएको छ Windows, OS / २, म्याक ओएस एक्स y स्काई ओएस.
GIMP को वर्तमान संस्करणहरू (in सेप्टेम्बर de 2007) हुन्: स्थिर २.२.१2.2.17 (अन्त्य प्रयोगकर्ताहरूका लागि) र विकास २.2.4RC3 (परीक्षण, समीक्षा र कार्यक्रमको सुधारका उपयोगकर्ताहरूको लागि)। संस्करण १.२ बाट सब भन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमा अधिक पालिश ईन्टरफेस र प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस र पछाडि अन्त। भविष्यको लागि, यो GIMP लाई अधिक सामान्य ग्राफिक्स लाइब्रेरी भनिने आधार बनाउने योजना गरिएको छ GEGL, यसैले केही आधारभूत डिजाइन सीमितताहरूलाई आक्रमण गर्ने जुन धेरै सुधारलाई रोक्दछ, जस्तै नेटिभ समर्थन CMYK.
थप जानकारी: विकिपीडिया
स्पेनिशमा आधिकारिक वेबसाइट: गिम्प GenericName
डाउनलोड गर्नुहोस्: पोर्टेबल जिम्प
जिम्प प्रयोग नगरेकोमा त्यहाँ कुनै पनि बहाना छैन ...। त्यसो भए अघि बढ...
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » जिम्प - नि: शुल्क डिजाइन
के बकवास !! त्यहाँ कुनै पनि जडान छैन onnlineeeeeeeeee सबै डाउनलोड गर्न छ!
वेब २.० - १०० अनलाइन जेनेरेटरहरू